Maausk Movement - WRSP
UMUAKA MAAUSK MGBE
1987: E guzobere ụlọ ọgbakọ nchebe nke akpọrọ Tõlet.
1987: Nzukọ nke “mgbede Tọzdee” nke Tölet malitere.
1988-1989: Akwụkwọ akụkọ Videvik (chi ojiji) na Hiis (edisana Ashera) (1988-1989) bipụtara.
1995: E guzobere nzukọ Maausk, oflọ nke Taara na okpukpe ndị obodo (Maavalla koda) wee banye na ndekọ nke òtù okpukpe nke steeti Estonia.
1995: Ndị nkuzi Maausk bipụtara isiokwu abụọ na akwụkwọ akụkọ kwa ụbọchị Poste banyere echiche nke Maausk.
1995: E guzobere sublọ nke Härjapea subgroup.
1995: E guzobere sublọ nke Emujärve subgroup.
1995: E guzobere sublọ nke Emäjogi.
2002: Houselọ Muhu na Saaremaa e guzobere ya.
2010: E guzobere oflọ nke Viru subgroup.
E hiwere ụlọ ọrụ gọọmentị nke Maausk (okwukwe ụwa) Estlọ Estonia nke Taara na okpukpe ndị obodo (Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla koda) bụ nke e guzobere na 1995. Mmalite nke usoro Maausk nwere njikọ na ọgba aghara mmekọrịta ọha na eze na mbibi nke Soviet Union . Agbanyeghị, nguzobe nke obodo nke Maausk nwere ogologo akụkọ ihe mere eme bidoro na edemede mba na nke ịhụ mba n'anya na narị afọ nke iri na itoolu. Okpukpe Taara na-ezo aka na nzukọ okpukpe mbụ nke e guzobere na 1930s.
A ghọtara Maausk na ọ bụ dabere na agbụrụ Estonia, nke bụ akụkụ nke ndị agbụrụ Finno-Ugrian. Finno-Ugrian na-ezo aka njikọ dị n'etiti asụsụ dị iche iche a na-asụ gburugburu Oké Osimiri Baltic, n'etiti Russia, West Siberia na Hungary (Laakso 1991). Agbanyeghị na ịdị n'otu agbụrụ n'etiti ndị na-ekwu maka otu ndị a bụ ihe arụ ụka, echiche nke ịkekọrịta n'oge gara aga nke otu ndị a ji ike rụọ ọrụ na mbido narị afọ nke iri abụọ iji kwado mba onye Estonia. Estonia chọrọ nnukwu akụkọ banyere akụkọ ihe mere eme iji chọpụta mgbọrọgwụ na njirimara nke obodo echere (Anderson 1983) nke mba. Iji guzobe ụdị agam n’ihu na njikọ a n’etiti asụsụ Finno-Ugrian, a na-amụrụ ma nyochaa n’oge gara aga site na nyocha akụkọ ọdịnala na akụkọ ọdịnala, na ọtụtụ njem nyocha emere Siberia. N'oge ahụ, njirimara Finno-Ugrian na-emegide ọhụụ Indo-European mara. N'ime oge nnwere onwe nke mbụ nke Estonia (1918-1940), e guzobere òtù ọdịbendị dị iche iche iji zụlite mmekọrịta n'etiti ndị otu Finno-Ugrian.
Na 1928, otu ndị ọgụgụ isi guzobere “okpukpe mba,” Taara okwukwe, nke gbadoro ụkwụ na nkwenkwe ndị Estonia, e zubere ka ọ bụrụ onye ọzọ na chọọchị Lutheran ndị ọzọ. Okwu Taara pụtara Akwụkwọ akụkọ nke Henry nke Livonia, nke dị ihe dị ka narị afọ nke iri na atọ agha megide ndị Estonia. A kpọrọ Taara, nke a sụgharịrị dị ka chi nke Estonia, na-akpọ oku na agha ahụ, nke mere na Saaremaa. Okpukpe Taara bu oru nke ndi nwere ọgụgụ isi bu ndi choro iji uzo ozo me ka okwukwe di ohu (Altnurme 2006: 62; Kuutma 2005: 62; Västrik 2015: 134). Mgbe Soviet Union nwesịrị Estonia, ndị ọchịchị Soviet machibidoro òtù ndị na-akwalite ọdịbendị Finno-Ugric iwu. A na-egbochikwa ndị na-eme Taara kpamkpam, na n'oge Soviet, okwukwe dị naanị na ezinụlọ ole na ole na mba ọzọ (Altnurme 2006: 62).
N'oge ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke Soviet Union na 1960s, ọ ghọrọ ihe a nabatara ọzọ igosi mmasị na nketa Finno-Ugrian (Kuutma 2005: 55). Na njedebe nke 1980s, ọtụtụ ụmụ akwụkwọ mahadum nwere mmasị na ọdịbendị Finno-Ugrian n'ihi na ihe nketa na njirimara a na-emegide ọchịchị Soviet. Ọnọdụ ntụsara ahụ n'oge amụma mgbanwe Gorbatchev nke Perestroika nyere ndị na-eto eto ohere ịmụ ma gosipụta mgbọrọgwụ na ọdịnala ha. Nzukọ ugbu a nke Maausk nwere mmalite ya na Tõlet na-echebe ihe nketa nke ọtụtụ n'ime ndị na-eme ihe ugbu a mụtara banyere okpukpe. Ndị guzobere klọb ahụ bụ ụmụ akwụkwọ agụmakwụkwọ na-eto eto n'obodo Tartu na njedebe nke 1980s ndị nwere mmasị na mgbọrọgwụ okpukpe ha. Na mmemme a na-akpọ “mgbede Tọzdee,” a tụlere ọdịnala na ọdịnala ndị Estonia. Na akwukwo ozi Hiis na Videvik, a gbasara ozi banyere ihe nketa Estonia na Maausk. Ndị ntorobịa agụmakwụkwọ a rụrụ ọrụ dị mkpa na okike ọha na eze nke Maausk na mmalite afọ nke njem ahụ, na-ahazi ogige nchekwa afọ ofufo na ebe ndị dị nsọ akụkọ ihe mere eme dị na ime obodo na ihe omume ọha na eze na 1980s na 1990s (Kuutma) 2005: 65). N'oge a, e webatara ọtụtụ akara ngosi nke Maausk, dịka ogwe osisi dị nsọ, ọtụmọkpọ, ejiji ndị mmadụ emezi na ọkụ ịchụ àjà. N'otu oge ahụ, ụkpụrụ na ụdị ọrụ dị mkpa, dị ka ịbịaru nso okike, mmasị nri yana mmekọ ọnụ na ntụrụndụ.
Ka ọ na-erule oge e guzobere Estlọ Taara na okpukpe okpukpe Estonia na 1990s, ụmụazụ ole na ole nke Taara enweghị mmasị ịtọlite ​​nzukọ nke aka ha, kama kama ha chọrọ ịbụ akụkụ nke nzukọ ọhụrụ edebanye aha Maausk. Agbanyeghị, Maausk nke oge a dị iche na okwukwe Taara mbụ na ọtụtụ ụzọ. Ọ bụ ezie na ndị nnọchi anya oge mbụ nke Taara gosipụtara okwukwe Estonia dị ka ọdịnala otu mmụọ, Maausk bụ okpukpe polytheistic. Ọ bụ ezie na ndị nwere ọgụgụ isi bụ ndị malitere ịkwalite Taara kwetara na ha na-ekepụta okpukpe ọhụrụ, Maausk anaghị ewere na ọ guzobere mana a na-ahụta ya dị ka ịga n'ihu nkwenkwe na ọdịnala ọdịnala oge ochie nke Ndị Kraịst. Ndị otu Maausk na ndị na-eme ya gosipụtara nke a.
Aha ahụ bụ Maausk na-ezo aka n'okpukpe ndị Estonia. N’uzo putara ihe, oputara na okwukwe ala ma obu okwukwe nke ala. Ndị na-arụ ọrụ Maausk na-ekwusi ike na ọ dịghị onye Maausk nke ga-abụ otu maka onye ọ bụla. Ọ bụkwa ihe a na-ahụkarị na ndị na-eso ụzọ na-agbaso usoro na ọdịnala dị iche iche dị iche iche dabere na mpaghara mpaghara ma a ghọtara na ndị a bụ ọdịnala amaala n'ime Estonia. Ihe njirimara Finno-Ugrian dịkwa mkpa maka ndị ọrụ ugbu a. Nkwenkwe ndi ọdịnala na ọdịnala ndị otu Finno-Ugrian ndị ọzọ dị oke mkpa ma bụrụkwa ndị e binyere maka Maaus ugbu ak omume. A na-ahụta ụzọ ndị mmadụ si eme Maausk dị ka ihe nzuzo. Agbanyeghị, omume ndị egosiputara n'ihu ọha dị ka ihe ọhụụ ọhụụ anaghị anabata ya nke ọma na nzukọ gọọmentị, nke na-ekwusi ike na ịga n'ihu nkwenkwe ọdịnala Ndị Kraịst dịka ihe ndabere maka omume Maausk. Maausk na-akọwakarị "ụzọ ndụ" karịa okpukpe.
Maausk enweghị ederede dị nsọ. Agbanyeghị, enwere ike ịsị na ụfọdụ ntọala ntọala nwere ike ịmata nke gụnyere mmụta ọdịbendị ọdịnala ndị ama ama mere na Estonia na n'etiti ndị Finno-Ugric ndị ọzọ, dị ka Mari na Udmurt. Ihe ndị na-eso ya na-ekerịta bụ ekele maka ụdị ọdịnala ọdịnala dị iche iche anakọtara na ebe a na-ede akụkọ ọdịnala na-egosipụta nkwenkwe na omume na mpaghara ụfọdụ. A na-adọtakwa ndị na-eso Maausk n'akụkụ ederede na-ekwenye n'echiche bụ na asụsụ bụ ihe mmalite n'echiche ndị mmadụ na n'ịkọwa ọdịbendị. Ya mere, ndị ọrụ Maausk kwenyere na ndị Finno-Ugrians na-ekerịta ụzọ dị iche iche nke nghọta ụwa (Rinne 2016: 23).
Ọ bụ ezie na ndị na-akwado Maausk na-ewetakarị ịdị mkpa nke akụkụ nkuzi yana esemokwu ndị metụtara ya, enwere ike ịghọta ụfọdụ nkewa n'ụzọ ndị ọrụ ahụ si ele Maausk anya. Maka ụfọdụ, eziokwu nke akụkọ ihe mere eme na ihe nketa na omume nke oge gara aga kwesịrị ịduzi omume. Maka ndị ọzọ, "mmetụta dị n'ime" bụ ụkpụrụ nduzi kachasị mkpa. Tù nke ikpeazụ ahụ nwere ihe okike na ihe ọhụrụ na omume ha, ebe ụlọ ọrụ Maausk na-akwado onye nke mbụ. Otú ọ dị, ọ dịghị nhazi nke ọ bụla n'etiti ìgwè ndị a na usoro dị n'etiti ha anaghị edozi (Rinne 2016: 26).
Ọ bụ ezie na Maausk enweghị usoro mmụta okpukpe nke usoro mmụta okpukpe ma ọ bụ usoro nke echiche omume na ụkpụrụ omume, enwere nkwenye zuru oke na echiche nke ọdịdị polytheistic, yana ngosipụta nke ike karịrị ike. Agbanyeghị, ndị ọkachamara anaghị achọkarị ikwu maka ahụmịhe karịrị nke mmadụ ma ọ bụ iji mee nnukwu ihe akaebe banyere ahụmịhe ha banyere ọnọdụ uche gbanwere agbanwe. Kama nke ahụ, ha na-ekwukarị na mmụọ nke okike nọ nwayọ na ndụ ha kwa ụbọchị. Akwadoro nmekorita nke ya na okike, a na ewere onye obula dika onye kwesiri ka emee ihe nke aka ya na okike. Nke a na - edugarị ndị na - eso ụzọ ka ha soro ndụ na - adịgide, nke gụnyere, dịka ọmụmaatụ, na-ahọrọ nri ahịhịa na akwa eriri akwa. Ndị niile na-asọpụrụ Maausk na-eche na okpukpe ha dabere na mmekọrịta pụrụ iche na okike. A na-ahụta ọdịdị dị ndụ na ikike ndị nwere ike ịmetụta gị na nke enwere ike jikwa ya site n'ụzọ dị iche iche nke ịsọpụrụ na ekele maka okike, dị ka ọmụmaatụ inye onyinye ma ghara imerụ osisi, osisi na anụmanụ.
Maausk nwere ike ịkọwa dịka ọdịdị nke ikpere arụsị nke oge a nke gosipụtara mmekọrịta dị n'etiti ụmụ mmadụ na ọdịdị ma weghachite omume okpukpe gara aga. A pụrụ ịkọwa ọdịiche dị iche iche nke Ebe Ọwụwa Anyanwụ Europe nke okpukpe a dị ka ihe na-eme mgbe mmekọrịta mmadụ na ibe ya gasịrị, a na-akpọkwa ya "okpukpe ndị obodo." Okpukpe nke ndi obodo bu okwu nke ndi oru Maausk kariri ikpere arusi, nke ha ghotara na ha bu ihe echeputara karia ha noo na nkwenye nke ndi ochie. Okpukpe nke ndị dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Europe na-ekwusi ike na nna nna ochie na nkwenkwe ọdịnala ndị Kraịst tupu oge Ndị Kraịst wee na-ejikọta na mpako agbụrụ (Aitamurto na Simpson 2013: 1; Roundtree 2015: 1). Agbanyeghị, mmeghari ọgọ mmụọ ọwụwa anyanwụ Yurop nwekwara akụkọ ọdịbendị na nke ha dị iche. Dịka ọmụmaatụ, kama ịdenye aha na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị na-arụ ọrụ Maausk na-ahọrọ ịtọ onwe ha dịka akụkụ nke ọdịnala ụmụ amaala ma na-esite na mkparịta ụka gbasara ikike mmadụ iji chebe ọnọdụ ha na ọha mmadụ. Enwere ike ịrụ ụka na njirimara ha na ndị a na-emekpa ahụ na-egbochi Maausk na-agbaso nkwupụta okwu ịkpa ókè agbụrụ (Rinne 2016: 94.) Agbanyeghị, nke a anaghị egbochi mmegharị ahụ ịnabata ụdị okwu a n'ọdịnihu. Ekwesịrị ịkọwa ya na ụfọdụ usoro ịhụ mba n'anya zoro ezo nwere ike ịghọta na mmegharị ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ nweghị ndị Estonia na-asụ Russian na-esonye na nzukọ ma ọ bụ na-emekọ ihe ọnụ, nke a abụghị ihe mgbagwoju anya ebe Maausk kwusiri ike na mgbọrọgwụ Estonia. A na-anabata ndị si na agbụrụ ndị ọzọ Finno-Ugrian bi na Estonia na mmemme. N'ihi nkwenye siri ike na mgbọrọgwụ Estonia, ndị na-eme Maausk anaghị arụkọ ọrụ na ndị otu okwukwe ndị ọzọ.
Omume Maausk dị iche na mmasị na nrụgide onye ọ bụla. A na-ekwukwa okwu banyere omume ndị a mgbe niile ma na-atụle ya. Isi okwu n'arụmụka ndị a bụ ọchịchọ izere mmetụta ndị na-abụghị eziokwu na nke Ndị Kraịst. Na Aralọ Taara na Okpukpe Ndị Estonia nwere oge kalenda ya nke a na-agụ afọ site na agbaze nke glaciers na 8213 BC (Ọdachi Billingen). Otú ọ dị, ngụkọta kalenda a bụ ihe atụ karịa ka ejiri ya na ndụ kwa ụbọchị. Na kalenda Maausk, aha ndị ọnwa agbanweela gaa na ihe a na-eche dị ka okwu Estonia kachasị mma.
Shlọ arụsị maka ndị na-eme ihe bụ ebe dị nsọ na ọdịdị a na-akpọ Hiis. Ndị a nwere ike ịbụ otu ihe dịka ebe sara mbara karịa n'elu ugwu ma ọ bụ ogwe osisi (Kütt 2007: 185). [Foto dị n'aka nri] Hiis na-eleta naanị ya, ya na ezinụlọ ya ma ọ bụ na nzukọ Maausk a haziri ahazi. Ha bụ ebe ofufe na mkparịta ụka n'etiti ndị nna ochie na mmụọ nke okike. Ha bụkwa ebe a ga-anọ na nke ndị nwere ụdị obi ahụ. A na-eme nzukọ na njikọta njikọta na ebe ndị a.
E nwere ụdị ebe abụọ dị nsọ: akụkọ ihe mere eme na ndị mmadụ n'otu n'otu. Ebe dị nsọ dị iche iche na-abụkarị otu ihe, dịka osisi ma ọ bụ okwute, ma dị n'ime ogige ụlọ, n'akụkụ ọhịa, ma ọ bụ n'ebe ọzọ bara uru. Ebe nsọ dị iche iche nke akụkọ ihe mere eme na-enye akụkọ ihe mere eme ma ọ bụ ihe ochie mgbe ochie nke ojiji nzuzo. Offọdụ ebe ndị a maara ọha na eze ma na-echebe site na okike nchedo na mmemme nchedo ihe nketa. Ekpuchidola ụfọdụ n'ime ha ka ebe nchekwa ihe mgbe ochie na 1970s n'oge Soviet. Ala Estonia enweghị usoro mmemme nchedo nkịtị, mana ndị nkuzi Maausk na-arụsi ọrụ ike n'ịkwalite ụdị ihe a. Ha na-esonye n'ọtụtụ mmemme nchedo ihe nketa nke gọọmentị kwadoro.
A na-ebipụta ụkpụrụ omume na ebe dị nsọ na ibe weebụ nke Estlọ Taara na okpukpe okpukpe. A na-ewu ha na ndabere nke akwụkwọ akụkọ mgbe ochie na ihe ọmụma banyere ebe dị nsọ na ala Mari na Udmurt. Iwu ndị ahụ na-ekwu ma ọnọdụ uche onye ọ bụla yana ọdịdị na omume mmadụ. Dika iwu si di, mmadu kwesiri idi ocha na uche. Mmadu kwesiri inwe nkwanye ugwu na obi di nwayo mgbe o na abanye ebe di nso. Onye obia kwesiri ikene ekele ma kelee ndi mmuo ma hapu ha ma hapu ebe ha. Ekele a na-eme site n'ịkụ mbadamba osisi kwụgidere n'etiti osisi n'ọnụ ụzọ ugboro atọ. A naghị ekwe ka egbutu ma ọ bụ dọka alaka osisi na ahịhịa ọ bụla ọzọ. Agbanyeghị, enwere ike iji alaka dị iche iche daa nkụ iji sie nri dị nsọ. A ga-ewepụsị ihe niile ị na-eme. A ga-eji nkwanye ùgwù na-enye mmiri, na-enye okwute na osisi. Mmadu aghaghi itinye ukwu ya n’ime isi iyi. A na-ahọrọ uwe ọcha mgbe ị na-abịa n'ebe ndị dị nsọ. Iwu ndị a ka a na-ekwurịta okwu oge niile n'etiti ndị na-eme ọrụ na ụfọdụ na-agbaso ha karịa ndị ọzọ. Dị ka ndị ọrụ ahụ si kwuo, iwu a bụ iji kwadebe ndị mmadụ ịhapụ ịdị ndụ kwa ụbọchị wee banye ebe dị nsọ ma dọọ onwe ha aka inweta ahụkebe. Iwu ndị a kewapụrụ ebe dị nsọ na oke ọhịa (Rinne 2016: 111-12).
Ememe kalenda Maausk dabere na usoro afọ ọ bụla nke ọha mmadụ na-akọ ugbo. Na kalenda Maausk, enwere ezumike iri atọ na abụọ. N'ime afọ ndị gara aga, otu Maausk dị iche iche haziri ihe jikọrọ aka na ụbọchị ezumike abụọ wee nabata ndị ọrụ niile ka ha sonye. Otu ezumike bụ suvistepüha, nke na-eme na Mee-June ma nwee n'oge gara aga na-arịọ maka ngọzi ịgha mkpụrụ ubi, ma o nwere dị iche iche pụtara dabere na ọnọdụ. Agbanyeghị, n'oge a ọ bụkwa maka ịkwanyere ndị nna ochie na na-asọpụrụ mmụọ nke okike. Ezumike ọzọ bụ hingedepüha; ọ na-eme na Nọvemba ma ọ bụ maka ncheta ndị nna nna. N'ụbọchị ahụ ka a na-ekelekwa mmụọ nke okike site n'ememe. Nzukọ ndị a na-ejikọ ọnụ na ebe ndị dị nsọ nwere ihe dị iche iche dịka abụ na egwu ndị mmadụ, isi nri na ọkụ ọkụ [Image na nri] na emume ebe a na-agwa ndị nna nna na ndị mmụọ okwu ma kelee ha.
Ndị ọrụ ahụ na-eweta nri na mkpụrụ osisi emepụtara n'ụlọ. Tinyere porridge ndị a na-etinye n'ime arịa osisi na akwa ọcha na nso osisi dị nsọ. Onye ndu nke emume a na-agwa ndi nna ochie na ndi mmuo ndi ejikoro na okike. A na-ejikarị ogologo ogologo ajị anụ ajị anụ gbaa gburugburu osisi dị nsọ. Offeringsfọdụ obere onyinye nke nri a na-eme n'ụlọ, achịcha dị iche iche, mkpụrụ ego na eri ajị anụ na-etinye na okwute ndị dị nsọ na n'akụkụ osisi, [Foto dị n'aka nri] na ụfọdụ ngọzi na adreesị ndị mmụọ na ndị nna nna. N'ikpeazụ, a na-eri nri ahụ na ụdị mmemme picnic dị jụụ.
Emume ndi mmadu n'otu n'otu, emume kwa ubochi nwere ike igunye otutu omume na omenala di iche iche. Iji maa atụ, ndị mmadụ nwere ike ịchụrụ anụmanụ ihe oriri, ọkụ ma ọ bụ chi ụlọ ma gọzie nri ha tupu nri. Ndị na-asọpụrụ Maausk nwekwara ike iyi uwe ọdịnala na ọtụmọkpọ, yana ịgba egwu na ịgụ egwu egwu ọdịnala. A na-asọpụrụ ụzọ ndụ ugbo gara aga yana nka ọrụ aka ochie (Rinne 2016: 25).
Ndị na-eme ọrụ Maausk ebughi n'obi ịtọlite ​​obodo utopian, na ndụ ha kwa ụbọchị adịchaghị iche na nke ndị Estonia nkezi. Agbanyeghị, ọtụtụ ndị ọkachamara na-arọ nrọ maka ibi ndụ onwe ha jikọtara na okike. N'ikwu eziokwu, nrọ a adịghị mfe iru na ọha mmadụ nke oge a.
Maausk enweghị ndị isi okpukpe, ndị ọkachamara na-ekwusi ike na nke a. Otú ọ dị, e nwere ụfọdụ ndị a na-akwanyere ùgwù bụ ndị a na-ewere dị ka ndị maara ihe banyere Maausk karịa ndị ọkachamara na-arụ ọrụ. A na-emekarị ememe ndị a site n'aka otu ndị ahụ na nzukọ njikọta na ụlọ nsọ dị nsọ. A na-ahụta ndị ọrụ a ka ha mara nke ọma na akụkọ ntolite nke nkwenkwe na ememme ndị mmadụ na-aghọta na ememe ndị dị ugbu a ga-aga n'ihu.
Estlọ Taara na Okpukpe nke Estonia gụnyere obere ìgwè ise a haziri na mpaghara ala gburugburu Estonia ma ghọta na ha nwere ọdịnala dị iche iche na asụsụ. Ìgwè ndị ahụ gụnyere oflọ Härjapea (nke e guzobere na 1995), oflọ Emujärve (nke e guzobere na 1995), älọ Emäjogi (nke e guzobere na 1995), Mulọ Muhu na Saaremaa (nke e guzobere na 2002), na oflọ Viru (guzobere na 2010). Ndi isi otu ndi mmadu hoputara sitere na subgroups. N'oge edere nke a na 2019 ọ nwere mmadụ iri na asaa ma ndị nhọpụta atọ na-elekọta ya. Nzukọ a na-ahazi ihe omume kwa afọ ebe a na-enye onyinye na aha nke Enyi nke saịtị Hiis maka uru na nchedo ebe nsọ ahụ. A na-ekwupụtakwa onye mmeri nke asọmpi foto a na-ahazi kwa afọ banyere ebe dị nsọ na mmemme a.
Dabere na ibe weebụ nke Estonian House of Taara na Native Religions ọrụ na ihe omume nke nzukọ gọọmentị gụnyere ịkọwa na ịkwalite ọdịnala mpaghara, nyocha banyere ọdịnala ọdịnala na okpukperechi na-anọchi anya ndị na-eme Maausk na ọha mmadụ na ajụjụ ndị metụtara nnwere onwe okpukpe. . Nzukọ a esonyela na Roundtable of Estonian Organizations, nke na-achọ ịbawanye nnabata okpukpe na nnwere onwe na ọha mmadụ. Ndị na-arụ ọrụ Maausk anọwo na-arụ ọrụ na nchebe nke ebe ndị dị nsọ n'akụkọ ihe mere eme site na ikpe ụlọ ikpe, nke ụfọdụ n'ime ha nwere ihe ịga nke ọma.
Aralọ Estara na Taara na okpukpe ụmụ amaala anaghị egosi ọnụọgụ ndị so na ya. Dika ulo ndi Estonia nke 2011 na onu ogugu ndi mmadu, n'ime onu ogugu 1,300,000, ndi mmadu 1,925 choputara okpukpe ha dika Maausk na 1,047 dika Taarausk. Ọnụ ọgụgụ ahụ amụbaala kemgbe ọnụọgụ 2000 mgbe e nwere ihe ruru 1,054 Maausk ndị na-akwado ya na ndị Taara kwere ekwe. Enwere ike ịtụle ọnụ ọgụgụ ndị na-eme Maausk dị elu, ọkachasị na njikọ nke òtù okpukpe dị oke ala na Estonia, naanị pasent iri abụọ na itoolu nke ndị bi na ya. Enwere ike ịkọwa nke a nke akụkọ Estonia dịka akụkụ nke Soviet Union. Ọchịchị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-arụsi ọrụ ike belata mmetụta nke okpukpe na ọha mmadụ yana njikọ okpukpe na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba niile ndị na-elekọta mmadụ (maka okwu Estonia, lee Remmel 2010). Mgbanwe okpukpe nke post-socialist siri ike na mba ebe okpukperechi ma ọ bụ ụka nwere njikọ chiri anya na njirimara mba. Na Estonia, njikọ dị otú ahụ adịghị ike (Ringvee 2014). Otú ọ dị, njikọ okpukpe adịghị ekpughe omume na nkwenkwe okpukpe ndị ọzọ na-abụghị nke òtù okpukpe. Dị ka ihe atụ, ọnụ ọgụgụ ndị a sị na ha bụ òtù okpukpe na omume ọhụrụ anọgidewo na-arịwanye elu na Estonia.
Ọtụtụ mgbe, ịghọ onye otu Estonia nke aralọ Taara na Okpukpe nke Ndị Estonia na-amalite site na oge ịmara ndị otu, ihe jikọrọ ya na nzukọ. A gbara ndị gbara akwụkwọ maka ndị otu ajụjụ ọnụ iji jide n'aka na ụkpụrụ na nghọta ha banyere ọdịnala ahụ kwekọrọ na nke nzukọ ahụ.
Fọdụ ndị nọ na nzukọ a ma na-arụsi ọrụ ike na ya n'ihi na ha chọrọ inwe olu ma ọ bụ bụrụ ndị nọchitere anya ha na ọha mmadụ n'ozuzu, mana ndị otu ha anaghị emetụta omume ha nke Maausk na ha anaghị esonye na mmemme njikọ. N'ezie, iji na-eme Maausk ọ dịghị mkpa ịbụ onye otu nzukọ gọọmentị ma ọ bụ ọbụlagodi na nnọkọ nkwonkwo. Ọtụtụ ndị mmadụ na-akọwapụta onwe ha dị ka ndị na-arụ ọrụ nke Maausk n'agbanyeghị na ha anọghị na nzukọ a. Mgbe mmalite ụmụ akwụkwọ mahadum hiwere otu kachasị na Maausk, ndị ọkachamara n'oge a sitere na nzụlite dịgasị iche iche, nwere ọrụ dị iche iche na agụmakwụkwọ. Ihe ha niile na-ekerịta bụ mmasasị ọdịnala na mgbọrọgwụ ndị obodo yana ịkwanyere agwa ugwu ugwu.
Ngalaba subọ Maausk dabere na ọrụ ndị isi, ndị na-eme ka ndị mmadụ gbakọta ma hazie mmemme. Otú ọ dị, ọ bụghị ndị ọkachamara niile nwere mmasị isonye na ọrụ nkwonkwo, kama nke ahụ na-ahọrọ ememe ndị emechiri emechi, mgbe mgbe na netwọk ezinụlọ.
Maausk nwere ezigbo ọdịdị na ọha mmadụ Estonia n'ihi na a ghọtara na ọ bụ onye Estonia na ọ bụghị okpukpe mba ọzọ (Västrik 2015). Otú ọ dị, ọha mmadụ Estonia adịghị ele ndị ji okpukpe kpọrọ ihe anya ma ọ bụ ndị na-esonye n’òtù okpukpe n’ụzọ ziri ezi. Enwere ike ịsị na nke a bụ maka otu esi ahụ okpukpe na Estonia. Nke mbu, o jikọtara ya na Iso Christianityzọ Kraịst, nke dị na Estonia bụ akụkọ akụkọ ihe mere eme dị ka German, wee bụrụ okpukpe mba ọzọ. Nke abuo, na Soviet oge a na-egosipụtakarị ndị okpukperechi dị ka ndị isi mgbaka na ndị a tụkwasịrị obi na nke a ka na-emetụta akparamagwa e nwere n'ebe ndị okpukpe nọ n'obodo Estonia. Nke ato, dịka n'oge Soviet, enweghị agụmakwụkwọ okpukpe n'ụlọ akwụkwọ Estonia, nke a mekwara ọnọdụ ebe ihe ọmụma banyere ọdịnala okpukpe, nzukọ na ndị mmadụ pere mpe. N'iburu ọnọdụ a, ọ dịghị mfe ịchọpụta onwe ya dị ka onye okpukpe, nke a bụ otu n'ime ihe ndị mere ndị na-eme Maausk achọghị iji okwu "okpukpe" kọwaa omume ha (leekwa Rinne 2016). Otu ihe ahụ nwere ike imetụta ọnụọgụ ndị mmadụ na nzukọ Maausk gọọmentị.
** Jenni Rinne kere ihe oyiyi wee jiri ya mee ihe.
Foto 1: Osisi dị nsọ na okwute dị na Tammealuse Hiis na June 2014, tinyere onyinye nri na mkpụrụ ego akwụgoro n’elu okwute, wee jikọta eriri na ngalaba osisi.
Foto 2: Esi nri na-esi nri na ugwu dị nsọ nke Kunda, Nọvemba 2013.
Foto 3: Osisi dị nsọ n'ime Tammealuse Hiis, June 2012.
Aitamurto, Kaarina na Simpson, Scott. 2013. "Okwu Mmalite: Okpukpe Ndị Agadi na Ndị Okpukpe nke oge a na Central na Eastern Europe." Pp. 1-9 n'ime Ihe Omume nke Oge A na Ndị Ala Na-eme Ihe n'Ebe Etiti na n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Europe, nke Kaarina Aitamurto na Scott Simpson dere. Durham: Acumen Publishing Limited.
Altnurme, Lea. 2006. Christlusest Oma Usuni: Uurimus muutustest eestlaste religioossuses 20.saj.II poolel. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus.
Anderson, Benedict. 2006/1983. Obodo Kwesịrị Ekwesị: Ntughari uche na mmalite na mgbasa nke Nationalism. Fairfield: Ntughari.
Kuutma, Kristin. 2005. "Vernacular Religions na Invention of Identities behind the Finno-Ugric Wall." Temenos Nordic Journal nke Comparative Religions 41.
Kütt, Auli. 2007. “Maarahva pühade puude ja puistutega seotud käitumisnormid - Bipute a Nkeji edemede emelitere ikpeazụ: Tartu: Õpetatud Eesti Seltsi Ekepụtara 36.
Remmel, Atko. 2008. "Okpukpe nke dị na peeji nke nke mbụ Nõukogude Eestis." Ajalooline ajakiri 3: 245-80.
Ringvee, Ringo. 2014. “Okpukpe: Ọ bụghị ọdịda ma na-agbanwe. Gịnị ka ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na nnyocha e mere na-ekwu banyere okpukpe dị n'Estonia? ” Religion 44: 502-15.
Rinne, Jenni. 2016. Chọ Ezi Ndụ site n'okwukwe ndị obodo: Maausk Movement na Estonia. Stockholm: Södertörn nyocha akwukwo doctoral. Nweta site na http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:926135/FULLTEXT.01.pdf na 8 April 2019.
Ntughari, Kathryn. 2015. "Okwu Mmalite: Okwu gbara ọkpụrụkpụ bụ Ihe niile: Otutu na Paradox na Contemporary European Paganism. ” Pp. 1-24 na Mgbagha nke oge a na okwukwe ụmụ amaala na Europe na-eme ka ndị ọchịchị na ndị mba ọzọ, nke Kathryn Rountree deziri. New York: Akwụkwọ Berghahn.
Västrik, Ergo-Hart (1995). “The Heathens na Tartu 1987-1994: The Heritage Club Tõlet,”Nkwupụta ọgbakọ n’ọgbakọ nke oge gboo 3.
Västrik, Ergo-Hart. 2015. “N’ịchọ Ezi Okpukpe. Usoro a na-akpọ Maausulised nke a na-eme n'oge a na nkwupụta nke Nationalist. ” Pp. 130-53 na Mgbagha nke oge a na okwukwe ụmụ amaala na Europe na mkpali ndị Nationalist na-eme. New York: Akwụkwọ Berghahn.